हरेक दिन अलिकति सासुलाइ बिष खुवाउने यी बुहारी ! - Mitho Khabar
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on हरेक दिन अलिकति सासुलाइ बिष खुवाउने यी बुहारी !
आरती नाम भएकी एउटी युवतीको बिहे भयो । बिहेपछि आरती आफ्नो पति अनि सासू–ससुराका साथमा पतिघरमा बस्न थालिन् । केही दिनमै उनलाई महसुस भयो उनकी सासूसँग उनको सम्बन्ध सहज हुनेवाला छैन । सासूका साथमा बसेर बाँकी जीवन बाँच्न उनलाई असह्य कष्टकर हुने देखियो । सासू पुरानो विचारकी,बुहारी आधुनिक सोचाइकी । कुरा कसरी मिल्नु र रु दिनहुँ भनाभन हुन थालिहाल्यो ।
पितालाई छोरीको दुःखले दुःखी बनायो । उनले छोरीलाई प्रेमपूर्वक शिरमा थप्थपाए । उनले भने– ‘छोरी १ तिमीले आफ्नी सासूलाई विष खुवाएर मार्यौ भने ढिलोचाँडो पुलिसले पत्ता लगाएरै छाड्छ । तिमी जेल जानेछौ र मलाई पनि पुलिसले जेलको ढोकाबाट भित्र छिराउनेछ, किनभने विष दिएर षड्यन्त्रमा सघाएको आरोप मलाई पनि लाग्नेछ । यसो गर्नु ठीक हुँदैन ।’ तर आरती आफ्नो ढिपीमा अडिग रहिन् । उनले भनिन्– ‘हजुरले मलाई विष दिनैपर्छ । जस्तोसुकै आपत् आइलागोस् बरु,तर अब म त्यस बूढीको मुख हेर्न चाहन्नँ ।’
पिताले केहीबेर सोचेपछि भने–‘त्यसो भए तिम्रो खुसी ‘।। म के गर्न सक्छु र रु तर तिमीलाई पुलिसले हत्कडी लगाएर जेलमा हालेको देख्न म सक्तिनँ । मैले जसो भन्छु त्यसो गर्छौ भने मात्र म तिमीलाई विष उपलब्ध गराउन सक्छु । हुन्छ भने‘हुन्छ’भन ‘।’
‘मैले के गर्नुपर्छ त रु’आरतीले भनिन् स् पिताले विषको एउटा पुरिया हातमा दिँदै भने–‘तिमीले हरेक दिन यो विषको एक चिम्टी मात्र सासूको खानामा सुटुक्क मिसाउनुपर्छ । विषको यति थोरै मात्राले कोही मरिहाल्दैन,बरु बिस्तारैबिस्तारै नजानिदो गरी शरीर शिथिल हुन्छ,भित्रभित्रै ऊ रोगाउँदै जान्छ र छ महिनाजतिमा मानिस मर्छ । तिम्री सासूलाई तिमीले दिनहुँ अलिअलि विष खुवायौ भने उनी विषका कारणले हैन प्राकृतिक कारणले मरेकी हुन् भनेर सबैलाई विश्वास हुन्छ ।’
पिताले फेरि भने–‘तर तिमीले यो काम अत्यन्त होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ । ज्वाइँसाहेबलाई कत्ति पनि शङ्का हुनुहुँदैन । कुनै कारणवश तिमीले लापर्बाही गरिहाल्यौ भने तिमी र म दुवै जीवनभर जेलमा सड्नेछौँ । बुझ्यौ हैन कुराको गम्भीरता रु त्यसैले आजदेखि उप्रान्त तिमीले सासूसँग झगडा गर्न भएन,बरु उहाँको ठीकसँग सेवा गर्नू । कसैले तिम्रो बारेमा टीकाटिप्पणी गरिहाल्यो भने पनि तिमीले चुपचाप सुन्नू । कुनै पनि किसिमले जबाफ नफर्काउनू । भन,यो सब गर्न सक्छौ रु’ आरतीले सोचिन्–‘के भो र,पाँच–छ महिनाको कुरा त हो । त्यसपछि त बूढी मरिहाल्छे । यति समय त सहनै पर्यो नि ।’ उनले पिताको आदेश पूर्ण रुपले पालन गर्छु भनेर विषको त्यो पुरिया लिएर गइन् ।
दुबईका राजकुमार नेपालमा, काठमाडौं ओर्लनेवित्तैकै उडे झापातर्फ
मोडल खुस्बु ओलीलाई २ वर्ष कैद फैसला